बिहानीपख मर्निङवाक जानुभन्दा यौनसम्पर्क गरेकै जाती
आफ्नो जीउलाई तन्दुरुस्त बनाउन तथा मोटोपन र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न मर्निङवाक गर्ने प्रचलन आम छ। कतिपयले मर्निङवाकसँगै बिहानीपख कसरत पनि गर्छन्। मर्निङवाक वा कसरत दुवै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नै छन्, तर बढी परिश्रमबिना नै स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउने
- आफ्नो यौनाङ्ग सधैं सफा राख्नुपर्छ भन्दैमा आवश्यकताभन्दा धेरै पखाल्नु हुँदैन । - सधैं अगाडि (योनिमार्गतिर) बाट पछाडि (मलद्वार) तिर पखाल्नुपर्छ । यसले मलद्वारमा भएको जीवाणुलाई योनिमार्ग तथा पिसाब नलीमा जानबाट रोक्छ । - योनिमार्ग सफा गर्न महँगो साबुन चाहिँदैन,
अश्लिल भिडियो हेर्ने लत बढि नै छ भने सावधान
तपाईले मनको यौनेच्छा मेट्न पोर्न फिल्म कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? यदि पोर्न फिल्म हेर्ने लत बढि नै छ भने सावधान हुनुहोला । यसले अरु मानसिक समस्या त उत्पन्न गर्छ नै तपाइँको ज्यानै समेत लिनसक्छ । अमेरिकाको स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका यौन मनोविज्ञहरुका अनुसार अश्लिल
कपडा लगाएर हैन नांगै सुत्दा धेरै फाइदा
तपाइँ रातमा सुत्दा लुगा फुकाल्ने गर्नुहुन्छ की हुन्न..? सायद बाहिरी कपडा फुकालेपनि भित्री लुगा चाहीँ फुकाल्नुहुन्न होला । अझ अहिलेको जाडो याममा त बाहिरी लुगा समेत फुकाल्न धौ धौ हुन्छ होला । बाहिरी लुगा समेत नफुकालीकन सुत्दाखेरी सुत्न अप्ठेरो हुने र निद्रा नपर्ने
मंसिर, यौनसम्पर्कका बेला हरेक कुरालाई गम्भीर रूपले लिने गल्ती नगर्नुहोस्, अन्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनुहोस् । २. सम्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । यदि जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा
यस्ता कुराको तारिफ चाहन्छन पुरुष
मंसिर २० गते- कसैले तारिफ गरेको सुन्न निकै मज्जा आउँछ र घिरौँला जत्रो नाक बन्छ । महिलाहरु प्रसंसाका निकै भोका हुन्छन् भनिन्छ । तर महिला मात्र होइन, पुरुषहरु पनि आफ्नो तारिफ सुन्न उत्तिकै मन पराउँछन् । फरक यत्तिमात्र हो की महिलाहरु खासगरी आफ्नो सुन्दरताको
चर्चित गायिका ज्योति मगर भन्छिन्, के मलाई एक जना पुरुषले १४ वर्षकै उमेरमा अकस्मात टङ् किस खाइदिनुभयो
सानै देखि गीत संगीत र नृत्यमा रुची भएकी अहिलेकी चर्चित गायिका एवं नृत्यांगना ज्योति मगरकी आमाको चाहना नै ज्योति गायिका बनोस भन्ने थियो गायिका नभए पनि एउटा नेता बनोस भन्ने थियो । महिलाहरुको हकहीतको लागि बोल्ने कुनै नेता बन्न त सकिनन् ज्याति तर एउटा चर्चित गायिका
हनी सिंहका गीतले जंगली जनावरको आतंक नियन्त्रणमा
भारतको उत्तराखण्डका किसान तथा राज्य सरकार समेत बालीनाली खाइदिने जंगली जनावरको आतंकसँग लामो समयदेखि जुध्दै आएका छन् । सरकारले जंगली जनावरको आतंक नियन्त्रण गर्न चालेका हरेक कदम असफल हुँदै आए । आखिर उत्तराखण्डको नैनीतालका किसान आफैले यसको हल खोजेका छन् । जंगली
दुबै महिला साथी एकअर्काको बच्चालाई दुध चुसाउने
स्टेफनी टाटाबिट्टो र क्रिस्टल क्लेइन पाँच वर्ष पहिले फेसबुकमा साथी बनेका थिए । भर्चुअल दुनियाको यो मित्रता विस्तारै गहिरो सम्बन्धमा बदलियो । करीब दुइ वर्ष पहिले दुबैले बिहे गरे । दुबैका बच्चा पनि भए । दुबै साथीका बच्चा भएपछि आ आफ्ना बच्चाको हेरचाहका लागि समस्या